HomeWararka SomaliyaMadaxweynayaasha Jubbaland & Puntland oo dib ugu laabtay degaanadooda
February 8, 2021 Wararka Somaliya, Jubbaland, Puntland, Wararka Maanta 0
Madaxweynaha Puntland Saciid cabdullaahi Deni & Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Magaalada dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa waxaa ay Maanta dib ugu laabteen Magaalooyinka Garoowe & Kismaayo.
Labada Madaxweyne ayaa waxaa ay Magaalada Dhuusamareeb uga qeyb-galeen shirkii Madaxda dowladda, dowlad goboleedyada & Gobolka Banaadir ee looga hadlayay arrimaha doorashooyinka, balse aan wax natiijo ah kasoo bixin.
Magaalooyinka Garoowe & Kismaayo ayaa siyaabo kala duwan loogu soo kala dhaweeyay Madaxweynaha Puntland Saciid cabdullaahi Deni & Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
Intii ay ku sugnaayeen magaalada Dhuusamareeb ka sokow ka qeyb-galka Shirkii wadatashiga ayaa hadana waxaa ay Madaxda kale ee dowlad Goboleedyada ay la yeesheen kulamo gaar gaar ah oo looga hadlayay xaalada dalka.
Sidoo kale Labada Madaxweyne ee Puntland & Jubbaland ayaa waxaa ay xalay qeyb ka ahaayeen kulan dhinaca khadka Internet-ka ah lagula yeeshay xubno ka tirsan Beesha Caalamka, kaas oo ay kaga hadleen xaalada dalka & Arrimaha doorashooyinka.
Saacadaha soo socda ayaa waxaa la filayaa in Madaxweynayaasha Puntland & Jubbalnad ay ka hadlaan xaalada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan shirkii fashilmay ee Dhuusamareeb oo uu Madaxweyne farmaajo ku eedeeyay inay mas’uul ka ahaayeen.
Barlamaanka Somaliya oo Maanta diiday in uu hortago RW Rooble